रसुवागढी नाकाबाट चीनतर्फ हुने निर्यात १ वर्षदेखि ठप्प छ । आयात पनि न्यून मात्रामा भइरहेको छ ।
नेपाली कन्टेनर सामान लिन केरुङ जान नपाएको १ वर्ष पूरा भयो । अहिले नाकाबाट दैनिक चाइनिज ५ कन्टेनर मात्र सामान आयात भइरहेको छ ।
गत वर्षको माघ १५ देखि आयात प्रभावित भएको हो । शुरूमा हिमपात र ल्होसार पर्वका कारण बन्द भएको आयात कोभिड–१९ देखा परेपछि ठप्पप्रायः भयो ।
पटक–पटक आयात ठप्प हुँदा सयौं व्यवसायीका अर्बौं मूल्य बराबरका सामान चीनतर्फ रोकिएका छन् । केरुङभन्दा माथि खासा, न्यालम धिङग्री, सिगात्सेलगायत ठाउँमा गोदाममै सामान थन्किएको व्यापारी धर्म पौडेलले बताए ।
१ वर्षदेखि करीब २०० भन्दा बढी नेपालीका खाली कन्टेनर केरुङमा नै रोकिएका छन् ।
रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीले व्यापारीका रोकिएका सामान ल्याउन चिनियाँ भन्सार प्रशासनसँग पहल गरिरहेको जनाए । नाका प्रभावित भएपछि सामान आयात पनि घटेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा यस नाका हुँदै ३ अर्ब ७३ करोड ४ लाख ८६ हजार मूल्य बराबरको सामान आयात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १९ अर्ब ४१ करोड ७४ लाख ३६ हजार रुपैयाँको आयात भएको रसुवा भन्सार कार्यालयको तथ्यांक छ ।
आयात घटेसँगै राजस्व संकलन पनि घटेको भन्सार कार्यालयले बताएको छ । अहिले धेरैजसो राजस्व तिर्न नपर्ने खालका सामान आयात भइरहेको छ ।
कार्यालयले चालू आवको पहिलो चौमासिकमा १ अर्ब ४ करोड ५८ लाख ७१ हजार मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । जबकि २ अर्ब ९३ करोड ४ लाख ५२ हजार राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
भन्सार विभागले चालु आवका लागि रसुवा भन्सार कार्यालयलाई ११ अर्ब ३३ करोड ७५ लाख २९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिएको छ ।
चीनबाट हुने धेरैजसो आयात २०७२ मंसिरदेखि यही नाकाबाट हुँदै आएको छ । यस नाकाबाट तयारी कपडा, स्याउ, लेडिज सेन्डल, रबर, प्लास्टिकका जुत्ता चप्पल, हाते झोला, छालाको जुत्ता, मोटरको ब्याट्री, यूपीएस, प्लास्टिकका सामानलगायत वस्तुहरू आयात हुन्छन् ।
नेपालबाट चीनतर्फ धातुको मूर्ति, शृंगारका सामान, ऊनी गलैंचा, कार्पेट, भाँडाकुँडालगायत वस्तुहरू निर्यात हुने गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
बयलगाडा लोप हुने अवस्थामा
आरोप प्रत्यारोपको उत्कर्षपछि अब कसरी अगाडि बढ्ला ओली-नेपाल सम्बन्ध ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कुर्सी संकटमा, ३ सांसद चाहिँदा पाइएला जसपाको टेको ?
सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको आह्वान : ‘राजालाई स्थान दिएर पूर्ण राष्ट्रिय एकता कायम गरौं’
आगलागीपछि दोभान बजार पुनःस्थापित गर्न मापदण्ड तयार